Ukhozi lomubambe ngophondo – AMABHINCA
OBEYISILOMO somsakazi woKhozi FM uLinda ‘Mr Magic’ Sibiya uthi umi ngomumo ukuxoxisana neSABC abuyeke kulo msakazo uma kungenzeka. Ubephawula emuva kokuvunyelwa ukwenza isikhangiso emoyeni ekubeni eke wachithwa phambilini kuthiwa uzodida
> Uphenduke inhlekisa kwezokuxhumana
> Zikhuza ukuchitheka kwegazi Ezebhova
> Ushaye ibuya uMagic Voice
> Uzanefa Ngidi utalabhe Imfezemnyama
> Ushaye udaka emsakazweni uSphuzo
> Wawususa umsindo uQhosha
Izolo ohlelweni Itende Lomcimbi olusakazwa wuBheka “Beekay” Mchunu, uLinda ungenile wenza isikhangiso. Ethintwa uLinda uthe uyabonga kakhulu ukugcina emukeliwe wathi uthando lokusakaza lusekhona futhi umi ngomumo noma kungaqhamuka ithuba elincane
Uthe abanye bebembhalela ezinkundleni zokuxhumana bembuza ngendaba yakhe noKhoziFM. Uthe basazoqhubeka bafake ezinye izikhangiso ngaphansi kwenkampani ayisebenzelayo aphinde afake ezesikole
sakhe esifundisa ukusakaza. Uveze nokuthi kunesinye isikhangiso obekufanele sidlale ohlelweni lwasebusuku olusakazwa wuSipho “DJ Sgqemeza” Mbatha kodwa sagcina singadlalanga kodwa usenethemba lokuthi sizodlalwa.
ULinda uxoshwe emsakazweni ngo-2014 emuva kokuvela kwezinsolo zenkohlakalo kodwa walihamba icala wagcina ekhishwa phambili. Izinsolo zazihambisana nokuphambukisa imali okwakuthiwa kwenziwe uLinda.
Uphenduke inhlekisa kwezokuxhumana
Posted on July 5, 2020 July 6, 2020 Categories Formal
Previous Previous post: Uphenduke inhlekisa kwezokuxhumana